‘सेवा केन्द्र विस्तार गर्दै छौँ’ « Loktantrapost
‘सेवा केन्द्र विस्तार गर्दै छौँ’
१७ भाद्र २०७३, शुक्रबार १०:२३
कमलबहादुर बस्नेत अध्यक्ष, सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विर्तामोड
सिम्रिकको साधारणसभा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
–आज सिम्रिकको छैठौं साधारणसभा भव्यताका साथ आयोजना गर्दै छौँ । सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रमेश पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम हुँदैछ । पूर्ण तयारीका साथ व्यवस्थित रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ ।
शेयर सदस्य कति छन् ?
– अहिले सिम्रिकका शेयर सदस्य ९ हजार ३ सय ६६ जना हुनुहुन्छ । हामी अझै विस्तारको प्रयासमा लागि रहेका छौँ ।
वित्तीय स्थिति कस्तो छ ?
– सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना २०६७ माघ २५ गते स्थापना भएको हो । ६ वर्षको अवधिमा हामीले एउटा अभियान सञ्चालन ग¥यौँ । शुरुको वर्षदेखि नै सिम्रिक आत्मनिर्भर छ । अहिलेको स्थितिमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि निक्षेप यहाँ रहेको छ । ३० करोडभन्दा धेरै लगानी बजारमा रहेको छ । अहिले हामीले बाह्य ऋणको त्यति ठूलो अपेक्षा गर्नु परेको छैन । र, हरेक महिना पौने ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नका लागि सिम्रिकलाई कुनै समस्या झेल्नु पर्दैन । समग्रमा सिम्रिकको वित्तीय अवस्था मजबुत छ ।
कार्य क्षेत्र कति हो ?
–९ वटा गाविसबाट प्रारम्भ भए पनि अहिलेसम्ममा झापाभरि विस्तार हुन सफल भएको छ । झापामा रहेका ८ वटा सेवा केन्द्रमार्फत हामी ९ हजार ३ सय ६६ सदस्यलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । र, ५ वटा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि सहकारी विभागबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेको छ । थप भएकासँगै अब चाँडै नै १४ वटा सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गरिने छ ।
कहाँ–कहाँ खुल्दैछन् सेवा केन्द्र ?
–विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रलाई नै हामीले सकेट्न खोजेका छौँ । झापाको दक्षिणी गाविस बनियानीमा सेवा दिने जमर्को गरिरहेका छौँ । हात्ती पीडित क्षेत्र बाहुनडाँगीलाई पनि कार्यक्रम दिने हाम्रा अठोट हो । केही गर्नु पर्छ भनेर नै सिम्रिकले बाहुनडाँगीलाई रोजेको छ । खुदुनाबारीमा पनि सेवा विस्तारको गृहकार्य भइरहेको छ । गौरीगञ्ज र तोपगाछीस्थित केरखाबाट सेवा केन्द्र थपिँदै छन् ।
कतिले रोजगारी पाउनु भएको छ ?
–५ जना कर्मचारी र ५५ जना प्रारम्भिक शेयर सदस्यहरुबाट संस्था शुरु भएको थियो । अहिले प्रत्यक्ष रुपमा ७३ जनाले रोजगारी पाउनु भएको छ । शैक्षिक योग्यता भएर पनि बरोजगारी भएर बसेका युवालाई आर्थिक रुपमा सबल हुँदै हुनुहुन्छ । यो देनलाई चानचुने देन मान्न सकिँदैन । सरकारको दायित्व हामीले पूरा गरिदिँदै छौँ । १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी श्रृजना गर्दै छौँ । ९ हजारभन्दा धेरै सदस्य पनि कुनै न कुनै व्यवसायमार्फत आफूलाई सबल बनाउँदै हुनु हुन्छ ।
युवा पलायनलाई रोक्न सहकारीले के गर्न सक्छ छ ?
–सहकारीले बेरोजगारी दर घटाउन प्रसस्तै ढोका खोलेको छ । सहकारीको माध्यमबाटै आर्थिक र सामाजिक रुपमा परिवर्तन सम्भब छ भन्ने प्रमाणित पनि हुँदै गएको छ । तथापि, सरकारले व्यावसायिक सुरक्षा, बजारको व्यवस्था र नाफा गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सकेको छैन । तर, सहकारी क्षेत्रले रोजगारीका लागि गरिरहेको पहलमा सरकारी सहयोग भए काम खोज्दै विदेशिनु पर्दैन ।
सिम्रिकको नेतृत्व गरेपछि के–कस्ता सुधारका काम गर्नु भयो त ?
–विसं २०५४ सालबाट सहकारी अभियानमा होमिएको हुँ । ६ वर्षको अवधिमा संस्थागत विकास त छँदै छ, अहिले झापाका साढे आठ सय सहकारीका बिचमा सिम्रिक सहकारी पनि छ है भन्ने स्थितिमा पु¥यायौँ । झापाका उत्कृष्ट १० वटा सहकारीमध्येमा सिम्रिक पनि पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । सम्बन्धित निकायले पनि कुनै न कुनै रुपमा वर्गीकरण गरेको होला । आर्थिक रुपमा सदस्यहरुलाई सबल बनाउन एक गाउँ एक बाली अभियानको शुरुवातकै रुपमा गोलधापमा धेरै किसिमको कार्यक्रम ग¥यौ । केही सदस्यले सामुहिक रुपमा पशुपालन व्यवसायी शुरु गर्नु भएको छ । बिर्तामोडमा कृषिलाई नमूना बनाउन र अध्ययन केन्द्रकै रुपमा अघि बढाउन शनिश्चरेस्थित सालबारीमा सामुहिक कृषिफार्म खोलिएको छ । ३०–४० वटा राँगा र ५०–६० वटा बङ्गुर पालन गरिएको छ । २ वटा माछा पोखरी, ७ सय जति कुखुरा र १ सयको हाराहारीमा बाख्रा पालन गरिएको छ । ८–१० जनाले रोजगारी पाउनु भएको छ । कृषिमा आशा, उत्प्रेरणा जगाउन तथा परिवर्तनको आभाष दिलाउने हाम्रो अठोट हो ।
दुई दशकदेखि सहकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कस्तो रह्यो अनुभव?
–सहकारीको मर्म नै अमिट छ । संवेदनशील छ । सबै नै एक, एक नै सबै भन्ने भावना छ । सबै मिलेर एउटा लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त लाग्नु पर्छ भन्ने उद्देश्य छ । सामाजिक, आर्थिक र चेतनाको स्तरमा हाम्रो समाज धेरै माथि उक्सिसकेको छ । बैङ्क र वित्तीय संस्थासम्म पुग्ने स्थितिमा समाज थिएन । तर, सहकारीले गाउँगाउँमा गएर समूह गठन गरेको छ । आर्थिक पहुँच विस्तार गरिएको छ । सामुहिक रुपबाटै आर्थिक उन्नति र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने सहकारीको सिद्धान्त अनुरुप अघि बढ्दा मात्रै मुलुक स्वाबलम्बन बन्न सक्छ । त्यसैले म सहकारी अभियानमा छु ।
झापामा सहकारी गतिविधि कस्तो छ ?
–सहकारीको अभियान मेचीबाट महाकाली पु¥याउन झापाको योगदान ठूलो छ । विभागका तथ्याङ्क हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । सहकारीमा पनि चेतनाको आवश्यकता पर्छ । सहकारी आफै स्वचालित हुने होइन । यो सहकारी प्रतिको चेतना, विकास, सहकारीमा आधारित व्यवसायलाई हेर्ने हो भने पनि यो प्रष्ट हुन्छ कि झापा सहकारी अभियानमा अग्रपङ्तिमा छ । सदस्य विस्तार र कारोबार पनि उदाहरणीय छ । झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ पनि मजबुत छ नमूनाकै रुपमा अघि बढेको छ । अभियन्ता पनि प्रखर र अनुभवी भएकाले झापामा सहकारी आन्दोलन सफल र व्यवस्थित हुँदै छ ।
–हामीले ५ वर्षे योजना निर्माण गरेका छौं । अहिले ५ वर्षे वित्तीय प्रक्षेपण गरेका छ । आजको वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुँदैछ । र, २०७७÷०७८ सम्म पुग्दा २२ हजार घरधुरीमा सेवा पु¥याउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यो अभियानबाट १ सय १४ जना कर्मचारी नियुक्त गरिने छ । त्यसैगरी, त्यही अवधिमा साढे ३ करोडभन्दा माथि वार्षिक खुद नाफा आर्जन गरिने छ । ६४ करोडभन्दा माथि यस क्षेत्रमा लगानी हुने छ । ४३ करोड निक्षेप रहने लक्ष्य सिम्रिक सहकारीको छ ।
अन्त्यमा के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
–सिम्रिक सहकारीमार्फत जारी हाम्रो अभियानलाई साथ दिनु हुने सम्पूर्ण झापाबासी, सहकारी प्रेमीहरुमा आभार व्यक्त गर्दछु । सिम्रिक सहकारीलाई ६ वर्षको अवधिमा दिन दुई गुणा रात चौगुणा उन्नति गर्न सहयोग गर्नु हुने सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दछु । यो सहयोग झापाली सहकारी आन्दोलनकै सफलताको कसी हो । त्यसैले सहयोग र सद्भावको निरन्तरताका लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।